कृषि | NepalDut
दूध उत्पादक किसानहरुले तत्काल दूधको मूल्य बढाउन सरकारसँग माग गरेका छन् । राष्ट्रिय व्यवसायी पशुपालन तथा दूध उत्पादक कृषक समाज नेपालले पत्रकार सम्मेलन गरी दूधको मुल्य बढाउन माग गरेको हो । विगत तीन वर्षदेखि सरकारले दूधको मूल्य यथावत राख्दा किसानहरु मारमा परेको भन्दै समाजले तत्काल मूल्य बढाउन माग गरेको हो । आफूहरुको उत्पादन लागतमा विगत तीन वर्षयता ३० प्रतिशतभन्दा बढी मुल्यबृद्धि भएको जनाउँदै दूधको मूल्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढाउनुपर्ने उनीहरुको… पुरा पढौ
भारतीय सेतो आलुमा ४७ प्रतिशत विषादी
पोखरामा भारतबाट आयात गरिएको सेतो आलुमा ४७ प्रतिशत विषादी मिसावट भएको भेटिएको छ । भारतबाट बिक्रीका लागि ल्याइएको सेतो आलुमा बिषादीको रोकावट दर ४७ प्रतिशतसम्म भेटिएको बाली संरक्षण प्रयोगशाला कास्कीका बाली संरक्षण अधिकृत सञ्जीव बास्तोलाले बताए । “विषादी रोकावट दर ३० प्रतिशतसम्म हुँदा खानयोग्य हुन्छ, ३० देखि ४५ प्रतिशतसम्म यसको मात्र बढी भएमा एक हप्ता जसो अप्जरवेसन गरेर मात्र खान सकिन्छ,” उनले भने, “त्योभन्दा माथिको प्रतिशत आएमा खान अयोग्य ठहरिन्छ,… पुरा पढौ
‘बीउबिजन (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा स्वीकृत गरेको छ । बैैठकमा कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री चक्रपाणि खनालले प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरुले स्थानीय जातका बिउबिजनको संरक्षण गरिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद घनश्याम खतिवडाले वर्णशंकर बीउले कृषिमा दीर्घकालीन रुपमा नकारात्मक प्रभाव पारेकाले स्थानीय जातका बीउ संरक्षण गर्नुपर्ने बताए । ‘पहिले काँक्राको बीउ संरक्षणका लागि बियाँ भित्तामा टाँसेर… पुरा पढौ
पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १७ का महतगौंडा, दोबिल्लाका किसान खेतीपाती र पशुपालनमा व्यस्त छन् । परम्परागत रुपमा गरिरहेको खेती र पशुपालनलाई व्यावसायिक बनाउन सरकारी सहयोग पाएपछि उनीहरु हौसिएका हुन् । यहाँ सञ्चालित मुख्यमन्त्री वातावरणमैत्री नमुना कृषि गाउँ मंगलबार भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले किसान कृष्णप्रसाद भण्डारीलाई कोदाली हस्तान्तरण गरी उद्घाटन गरे । उनले प्रदेशका हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा १ नमुना कृषि गाउँ सञ्चालन भइरहेको बताए । मन्त्री थापाले… पुरा पढौ
हुने खानेको रोजाइमा ‘कोदो’
वर्षौंसम्म्म नबिग्रने विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने अन्न हो, कोदो । मानिसको शरीरमा आवश्यक पर्ने प्रोटिनको मात्रा अत्यधिक हुने कोदोको उत्पादन भने कृषिप्रतिको बढ्दो अनिच्छा र बसाइँसराइसँगै बर्सेनी घट्दै गएको छ । विशेषगरी पहाडी क्षेत्रमा साउनको पहिलो सातातिर मकै भाँचेपछि सर्वसाधारणले कोदो रोप्ने गर्दछन् । विगतमा कोदो रोपाइँका कारण चापाचाप हुने गाउँबस्तीका अधिकांश बारी यतिखेर बाँझै छन् । कोदोको उत्पादन घट्दै गए पनि यसको माग भने अत्यधिक बढ्दै गएको कास्कीको… पुरा पढौ
एभोकाडो पकेट क्षेत्र घोषणा
लायन्स क्लब अफ पोखरा आँगनद्वारा म्याग्दे गाउँपालिका वडा नं. २ संगको सहकार्यमा एभोकाडो पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । क्लवका अध्यक्ष रामनारायण श्रेष्ठले वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर रानाभाटलाई एभोकाडोको वृक्ष हस्तान्तरण गरी कार्यक्रम शुभारम्भ गरे । गत वर्षको वृक्षरोपण कार्यक्रम अन्तर्गत उक्त वडामा रोपिएका एभोकाडोका बिरुवा राम्र्रोसंग हुर्किएसंगै वडा कार्यालयसंग सहकार्य गर्दै यस पटक ५ सय बिरुवा हस्तान्तरण गरिएको छ । कार्यक्रमले वडाबासीको आयआर्जनमा थप सहयोग पुग्ने क्लबको विश्वास छ । क्लवका… पुरा पढौ
तरकारीको भाउ छोइनसक्नु, कहिले घट्छ त ?
पोखरामा तरकारीको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । पछिल्लो २ हप्ता यता तरकारीमा भएको मूल्य वृद्धिसँगै विपन्न परिवारलाई साँझ बिहान के तरकारी खाने ? भन्ने चिन्ता बढेको छ । पोखरामा २ हप्ता अघिसम्म प्रतिकिलो रु ८० पर्ने भिन्डी अहिले रु १ सय १० पुगेको छ भने सिमी रु ६० बाट १ सय पुगेको छ । यस्तै नयाँ आलु मूल्य बढेर रु ५५, पुरानो आलु रु ३५, नीलो आलु ५०,… पुरा पढौ
पछिल्लो दुई हप्तायता यहाँ तरकारीको मूल्य आकाशिएपछि उपभोक्ता मारमा परेका छन् । तरकारीमा भएको मूल्य वृद्धिसँगै विपन्न परिवारलाई साँझ बिहान के तरकारी खाने भन्ने चिन्ता बढेको छ । दुई हप्ताअघिसम्म प्रतिकिलो रु ८० पर्ने भिन्डी अहिले रु १०० पुगेको छ भने सिमी रु ६० बाट ९० पुगेको छ । यस्तै मूल्य बढेर नयाँ आलु रु ५५, पुरानो आलु रु ३५, प्याज रु ६०, लौका रु ७०, तानेबोडी रु १४०, काउली… पुरा पढौ
‘कतै डुबान त कतै सुख्खा’
तराईका अधिकांश जिल्ला यतिखेर बाढीको डुबानमा छन् । ठाउँठाउँमा बाढीपहिरोको समस्या पनि उस्तै छ । नेपालको चेरापुञ्जीको रुपमा पनि चिन्ने गरिएको पोखरा र आसपासमा भने अझै पर्याप्त पानीको अभावमा कतिपय स्थानमा रोपाइँ नहुँदा खेत बाँझै छन् । कास्की जिल्लासहित समग्र गण्डकी प्रदेशमा पानी पर्याप्त नपर्दा साउन लागिसक्दा हालसम्म जम्मा ६५ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । मानो खाएर मुरी उब्जाउने विशेष समयका रुपमा लिइने असार बिदा भइसके पनि पानी नपर्दा… पुरा पढौ
गाईवस्तुको गोठ कसरी निर्माण गर्ने ?
परिचय : नेपालमा धेरैजसो कृषकहरूको जीविकोपार्जन पशुपालनमा निर्भर रहेका छन् । कृषकहरूले गाईभैसीहरू दूध,मल तथा जोत्नका लागि पाल्ने गर्दछ । उन्नत पशुपालनमा गोठ, नश्ल, आहारा र स्वास्थ्य महत्वपूर्ण ४ खम्बाहरू हुन । गाईभैंसीको गोठमा घाम, वर्षा, चिसो, छाया, हावा र प्रकाशको समुचित व्यस्थापन नभएकोले गाईवस्तुलाई थप तनाव हुनगई तीनको उत्पादन घट्नुका साथै रोगबाट समेत ग्रसित हुने गरेका छन् । गाईवस्तुहरू प्रायःखुला ठाउँमा बाँधेर अव्यवस्थित तरिकाले पालन गर्दा नश्लको क्षमता अनुसार… पुरा पढौ